Xhumana no-Gay Shop
Thola ukuxhumana namuhla
Udinga iseluleko esithile? Umbuzo mayelana ne-oda lakho? Ufuna ukuba ngumlingani? Sithumele umyalezo esizokuphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka!
Igama imeyili Umlayezo
Ngokuhlola leli bhokisi bese uhambisa leli fomu, ngiyavuma ukuthi idatha yami yomuntu siqu izosetshenziselwa ukuxhumana nami futhi kumongo wesicelo sami esiboniswe kuleli fomu. Ayikho enye yokwelapha ezokwenziwa ngolwazi lwami. Ukuze wazi futhi usebenzise amalungelo akho, kufaka phakathi ukuhoxiswa kwemvume yakho ekusetshenzisweni kwedatha eqoqwe leli fomu, sicela uxhumane nathi Inqubomgomo yobumfihlo
Hlola icala ngenhla